Uma nje usiletha ikhaya elincane le-kitten, ngokuqinisekile usuzibuza ukuthi ungajwayela kanjani ikati ukuya emathini. Lo msebenzi obalulekile, ngoba ikati elingakaqeqeshwanga ukubhekana nesidingo sebheyi kuzokwenza lokhu noma kuphi endlini yakho. Ama-vets ancoma ukuthi ahlukanise i-kitten encane evela kumama ngaphambi kokuba aphendule izinyanga ezintathu. Ekuqaleni kokuphila, amakati afundisa amakhanda wonke amakhono adingekayo empilweni, kuhlanganise nesidingo sebheyi.
Okokuqala, i-kitten izobhekana nokucindezeleka ekhaya lakho, ngoba uzoyithatha kusuka kumama wakho bese ushintsha yonke imvelo esungezile. Ekuqaleni, akudingeki ukuba uthwale inkatho ezandleni zakho kuyo yonke indlu, kungcono ukumnika inkululeko nokugcina konke ukuhamba kwakhe. Ukuze ingane iqonde ukuthi kuyadingeka ukuba uhambe emgodini, kunconywa ukuthi ubeke itreyi eceleni kwe-kitten. Amakati afisa ukubhekana nesidingo sezinto ezifakiwe ezithambile, ngakho-ke udinga ukuthenga i-feline ekhethekile ye-tray yakho. Uma inkinozi ingaphenduli emgqeni, kufanele uyiphathe ngokucophelela ngonyawo bese ukhulula ukugcwalisa. Ngezinye izikhathi ngisho nangemva kwalezi zenzo, inja ayiqondi ukuthi yini ofuna ukuyifundisa, kodwa akudingeki uhlehle futhi umemele. Kukhona enye indlela yobuqili yokusiza ukuphendula umbuzo wokuthi ungajwayela kanjani ikati kuya emathini: ungasula isiqeshana sephepha emcinini wekati bese ufaka iphepha emgodini ekugcwaliseni bese wenza inkinobho ibambe.
Ngemuva kokusebenzisa zonke lezi zindlela, udinga ukuqapha i-kitten ngezinsuku ezimbalwa. Uma intombazane ilawula isidingo sendawo yefulethi, kuyadingeka ukuthi ugeze indawo engcolile engacabangi. Amakati awakuthandi iphunga lama-citrus, ngakho-ke izindawo ezingcolile zidinga ukugezwa nge-detergents nephunga lemon noma i-orange. Izilwane zakho ezifuywayo ngeke zisaphinde zishaye endaweni yakudala, futhi isixazululo somsebenzi wakho oyinhloko - indlela yokujwayela ikati kuya emathini - izotholakala ngokushesha kakhulu. Uma inkatho ivame ukuthunjwa endaweni eyodwa, ungafaka ipuleti yokudla lapho. Kuyaziwa ukuthi izilwane ezifuywayo, amakati ikakhulukazi, ahlanzekile, futhi ngeke ahlangabezane nesidingo eduze nendawo yokudla.
Ngaphambi kokuba ujwayeze ikati uye emgodini, kudingeka ukhethe ukugcwalisa okulungile. Abaningi bayazi ukuthi amakati anesisindo esibucayi sezinyawo zabo, ngakho-ke bayathanda ukumba emhlabathini ovulekile noma nge-sawdust. Manje imboni ikhiqiza i-silika gel, i-lump kanye ne- wood fillers. Okungabizi futhi okunomsoco kuyinto yokugcwalisa ngokusekelwe ezinkuni zezinkuni. Ukuze ikati lingasakazeli igcwele noma i-sawdust kulo lonke indawo yokuhlala, udinga ukubeka umugqa omncane eduze kwereyi, futhi indlu yakho izohlala ihlanzekile.
Njalo ingcolile ukugcwalisa kusuka kulayini. Amakati athande ukuhlanzeka futhi ngeke aswele igayipi elingcolile.
Lapho ukufutheka komsindo, akufanele ukuphoqa ikati elincane elinomzimba omuzi endaweni ephangayo: lokhu kuzomethusa kakhulu, futhi akaqondi ukuthi yisiphi isizathu sobudlova obunjalo.
Kuzodingeka uchithe isikhathi esiningi ukujwayela ikati kuya emathini, kepha yonke imizamo izokhokha esikhathini esizayo, futhi uzohlale uqinisekiswa ngokuhlanzeka kwekhaya lakho.
Mikhail Rudakov - biography nobuciko
Kata Beach Phuket: indawo, izibuyekezo, izithombe